မီဒီယာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေး Intern | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » မီဒီယာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေး International
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: မီဒီယာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေး International
ရာထူး: မီဒီယာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေး International
ကုမ္ပဏီ: ပစိဖိတ်ကမ်းခြေကို TV
Location: Pacifica CA US
ပစိဖိတ်ကမ်းခြေတီဗီနွေရာသီဝင်ရောက်ပြီး 2018 ရှာဖွေနေသည် !!
ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာဘာလဲ? ပစိဖိတ်ကမ်းခြေရုပ်မြင်သံကြားအဆိုပါ 1st ပြင်ဆင်ရေး, ပွင့်လင်းဝင်ရောက်ခွင့်ကို၎င်း, 1962 ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းရိုးတန်းအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ဆက်သွယ်ရေးရည်မှန်းချက်များထောက်ပံ့နိုင်ငံ၏အရှည်ဆုံး running အဝန်းတီဗီဘူတာရုံနှင့်မီဒီယာစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယျအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ရချင်သူကိုအလေးအနက်, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိတ် Intern များ, လက်-on ကို TV ကဘူတာရုံအတွေ့အကြုံကိုရှာကြသည်။
မာတင် @ 650.355.8001 ကိုဆက်သွယ်ပါ
အဘယ်သူမျှမအီးမေးလ်များကို ... ..Hurry, slot နှစ်ခုအလျင်အမြန်ဖြည့်ဆည်းနေကြသည်ကျေးဇူးပြုပြီး!
Duty ၏ DESCRIPTION: လက်ခံခဲ့သည်လျှောက်ထား Multi-ကင်မရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘဏ်ဍာ, ဝေးလံသောကင်မရာကိုလယ်ကွင်းများနှင့်တည်းဖြတ်အပါအဝင်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်မှုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အချင်းပြည့်မီလျှောက်ထားကိုလည်းက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေး, လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ဝဘ်ကဗီဒီယိုအပါအဝင်မီဒီယာအသစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူကြသည်။ Intern များအများပြည်သူလက်လှမ်းထုတ်လုပ်သူများကိုထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ပြီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်ဍာတာဝန်ပေးအပ်ရလိမ့်မည်။
ဆိုင်း4နာရီအသီးအသီးနေသောခေါင်းစဉ်:
2pm မှသောကြာနေ့6သို့မဟုတ် 6-10pm မှတနင်္လာနေ့
စနေနေ့ 10am-2pm, ဒါမှမဟုတ် 2-6pm ။
ရက်သတ္တပတ်ကတိကဝတ်နှုန်းနိမ့်ဆုံး 12 နာရီလိုအပ်သည်။
အရည်အချင်းများ: အဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံကိုလိုအပ်သော။ ဒါကမဟုတ်တဲ့ paid အလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သင်ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အချင်းများလေးနက်ကတိကဝတ်လုပ်နိုင်စွမ်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ကောင်းသောအမှုကျင့်ဝတ်, ကောင်းတစ်ဦးသဘောထားကိုနှင့်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒပါဝင်သည်။
လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် 2018-04-29